The 3 Akụkụ nke Okike Okike | Martech Zone
Fraịde, Septemba 26, 2014 Fraịde, Ọktọba 17, 2014 Douglas Karr
Enwere ọdịnaya dị ukwuu na weebụ ugbu a na ọ na-esiri m ike ịchọta isiokwu bara uru - n'agbanyeghị na ọchụchọ, mmekọrịta ma ọ bụ nkwalite. Akpata oyi wụrụ m na otú adịghị emetụ ọtụtụ n'ime atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya nọ na saịtị ụlọ ọrụ. Fọdụ nwere akụkọ na nso nso a na mbipụta akụkọ banyere ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọzọ nwere ọtụtụ ndepụta, ndị ọzọ nwere nsonaazụ ngosi banyere ngwaahịa ha, ndị ọzọ nwere naanị echiche dị ukwuu banyere idu ndú.
Ọ bụ ezie na emepụtara ọtụtụ ọdịnaya ahụ, ọ na-abụkarị akụkụ dị iche iche. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, otu ozi ahụ lekwasịrị anya n'otu ụdị onye ọbịa ahụ na otu ọkara ahụ… na ọdịnaya ọ bụla. N'uche m, enwere ọtụtụ akụkụ na usoro ọdịnaya echekwa.
Njikọ Persona - nke a bụ otu n’ime okwu ndị ahụ nwere ike jupụta oke n’ire ahịa ọdịnaya. Otú ọ dị, ọ bụ isi ya bụ naanị ma ị na-agwa ndị ọbịa dị iche iche bịara na saịtị gị ma ọ bụ na ị naghị agwa ya. Ma mgbe m kwuru ekwu okwu, M na-ekwu ma ọdịnaya ị na-ede na-emetụta ha ma ọ bụ na ọ bụghị. Anyị na-agbanwe ọdịnaya anyị dere nke ọma ntakịrị na blọọgụ teknụzụ ahịa. Anyị na-ede maka ndị ahịa site na ndị mbido gaa n'ihu… rue ndị tozuru etozu ide koodu nke ha.
Ebumnuche ndị ọbịa - gịnị kpatara onye ọbịa ji ewe ọdịnaya gị? Kedu nzọụkwụ na usoro ịzụ ahịa ha bụ? Ha bụ naanị ndị ọrụ ibe gị na-eme nyocha na iji ndụmọdụ gị na-azụ onwe ha? Ka ha bụ ndị nleta nwere mmefu ego ma dị njikere ịzụta? You na-agbanwe ọdịnaya iji ruo ma abụọ? Ikwesiri inye ọdịnaya nke kachasị maka ebumnuche onye ọbịa.
Ọkara na Channels - A na-eleghara usoro mgbasa ozi anya ka azụmahịa na-aga n'ihu na-eziga mana ụdị mgbasa ozi ejiri mee ihe bụ ihe dị oke mkpa n'iji ọdịnaya dị irè. Na-eri nri ụzọ atọ ndị ọbịa na-eri afọ ojuju? Visual, auditory na kinesthetic mmekorita bu isi. Whitearies, eBooks, infographics, mindmaps, ikpe ọmụmụ, vidiyo, ozi ịntanetị, broshuọ, mobile ngwa ọdịnala, egwuregwu… ọ bụghị ndị niile na-ege gị ntị nwere mmasị na blog post. Gbanwe ọdịnaya ga-enyere gị aka iru pasent ka ukwuu nke ndị na-ege gị ntị. Arygbanwe ọwa na-enye aka… Youtube maka vidiyo, Pinterest maka imagery, LinkedIn maka ide ihe, wdg.
Iji bido, jikọta okporo na mpempe akwụkwọ na kọlụm atọ ahụ - mmadụ, ebumnuche na ọkara. Tinye ọnwa nke ọnwa gara aga bara uru dị ka ahịrị ma jupụta nkọwa. You na-ahụ ihe na-eme ma ọ bụ na ị na-ahụ atụmatụ ọdịnaya dị iche iche? Olileanya ọ bụ nke ikpeazụ! Na ị kụrụ grail grail ma ọ bụrụ na i nwere ike mmezi ndị a niile na onye ọrụ na-eme ihe na-egosi na ọdịnaya gị na-anapụta ọrụ ị mepụtara maka… karịsịa ntụgharị
Omimi nke Ọdịnaya
Ọ bụrụ na enwere akụkụ nke anọ, ọ ga-abụ etu omimi ọdịnaya gị dị. Anyị na-niile hụrụ saịtị na wepụta a na-aga n'ihu iyi nke “5zọ 10” ma ọ bụ “XNUMX Surefire hodszọ na-” na ndị ọzọ anatara. Ihe ndị a bụ obere ibe nke ọdịnaya emere maka oriri ngwa ngwa. Ndị a na ọdịnaya ndị ọzọ nwere oke ọhụụ nwere ike ịkekọrịta ma weta ọtụtụ nlebara anya na saịtị gị. Agbanyeghị, ozugbo onye na - agụ ya nwere mmasị, ha anaghị enye ọdịnaya miri emi nke achọrọ iji gbanwee onye na - agụ ya site na onye ọbịa gaa na ndị ahịa ya.
Anyị na-ekekọrịta infographics na ndepụta gafee saịtị anyị n'ihi na ha na-adọta ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ. Mana iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ ahụ kwere nkwa ma mee ka ha nwee mmekọrịta, anyị ga-eweta ọdịnaya miri emi - dị ka post a! Usoro ọzọ anyị na-eji ndị ahịa anyị bụ na anyị na-ebido site na blọọgụ, wee rụọ ọrụ na nkọwa ihe ọmụma, wee nyekwuo miri emi site na akwụkwọ akụkọ - wee duga atụmanya ahụ na ngosi ma ọ bụ webinar. Nke ahụ bụ omimi nke ọdịnaya!
Tags: nyochaọwa ọdịnayaomimi ọdịnayandị na-ajụ ọdịnayaomimi nke ọdịnayanzubeikwu okwuebumnuche ahiapersonaebumnuche ndị ọbịaanyakedu ihe bụ ire ahịa ọdịnaya
Feb 4, 2013 na 11:47 PM
Nke a dị ezigbo mma, Doug. Lelee ịchụkwesịa n’izu a.
Feb 5, 2013 n’elekere 12:04 nke abali
Enweghị ike ichere, @ facebook-1229758293: disqus!